Dulce anwụrụ Jelly Saga - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Uncategorized / Dulce anwụrụ Jelly Saga
Emelitere ikpeazụ na Julaị 11, 2021 Site na Isobella Franks Hapụ ikwu
N'ụwa taa dị egwu, anyị kwesịrị ịchọta oge naanị anyị, oge na-eme ka ndụ dị ndụ, oge nke n’enyere anyị aka ịmịcha nke ọma n’ime nzuzu a anyị kpọrọ ndụ. Ọzọkwa, anyị ga-eji ụzọ mgbapụ kacha mfe maka gị si na Candy Crush jelii saga.
Banyere Njem ahụ
Dulce anwụrụ Jelly Saga bụ egwuregwu ịntanetị nke ị na-enweta ihe site n'ịchịkọta ọnụ 3 ma ọ bụ karịa otu jelii. Nke kacha mkpa, ọ bụrụ na ị weta karịa 3 jelii ọnụ, n'ụdị ọ bụla dị ka kehoraizin, vetikal, L, ma ọ bụ T, mgbe ahụ ị ga-enweta ohere ịmeghe ụfọdụ jelii pụrụ iche, dị ka jelii na-acha uhie uhie na agba aja aja. Ndị a pụrụ iche jelii dị nnọọ mma: ha na-ewepụ ahịrị ma ọ bụ kọlụm dum dabere na njem ị na-eme. Nhọrọ, e nwekwara ụfọdụ candies ndị ọzọ pụrụ iche na ọmịiko maka ndị nkịtị dị. Kpamkpam, ị ga-emeghe jelii ndị a na njem gị na Candy Crush jelii saga.
ugbu a, ịkwesịrị ịghọta na swiiti crush jelii saga bụ njem. E mesịa, ndị ọrụ ga-eme atụmatụ, atụmatụ, na-eche echiche, nakwa ihe ọchị na obi ụtọ na ogologo njem a. Enwere ihe gbasara 3665 ọkwa na 163 ngosipụta. Mgbe ihe omume ọ bụla gasịrị, ị na-agbanwe ọkwa na n'ụgbọ njem, you change your destination. In the first 63 ngosipụta e nwere 20 etoju, yiri ike ziri ezi? Ọ dị mma, mgbe ị nọ na oghere ị maghị ya ma ị na-agafe ọkwa ndị a n'ụzọ dị mfe. N'ihi, na nke fọdụrụ 102 ngosipụta, enwere 15 ọkwa n'ime ihe omume ọ bụla.
N'ezie, ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke Swiiti anwụrụ jelii sage ọ bụghị naanị ọchị gị. E wezụga, ọ bụ imeri Ajọ Queen. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ imeri megide ya, ị ga-agafe ọkwa niile na ngosipụta. Enwere ụdị pụrụ iche a na-akpọ isi-na-isi’ n'ime Dulce anwụrụ Jelly Saga ebe ị nwere ike ịsọ mpi ajọ eze nwanyị ozugbo!
Ọkwa nke Candy Crush Saga
Enweghị mgbagha ọ bụla, Egwuregwu Swiiti Crush dị ka ọ dị mfe, ma onye ọ bụla na-ejikọta ọtụtụ jelii, gi ma obu eze nwanyi, na-emeri mkpa. Mana, ịkwesighi ichefu na onye iro anyị bụ eze nwanyị ọjọọ na ọ mara ezigbo mma na ijikọta jelii.
Akpọrọ aha ihe ngosi ụfọdụ ama ama n'okpuru:
Igwe ojii swiiti owu
Strawberry ọwụwa anyanwụ
Ala dị larịị nke Poland
Ice ude Alps
Celestial Choco iko
Nzuko ozi dị nro
Ndagwurugwu owu na ọtụtụ ndị ọzọ
Ebumnuche na ihe mgbochi
ugbu a, ị nwere ike na-eche ihe dị iche n'etiti ọkwa ndị a dị iche iche? Ọ dị mma, azịza ya dị mfe ụdị ebumnobi ndị dị maka mgbanwe ọkwa ọ bụla. N'ihi ya, the limitations of each of the levels also changed. That means you won’t get bored or tired of the same objectives and hurdles, each level means something new to think about, something new to accomplish. Ya mere, Ọ bụghị naanị na ị na-atụrụ ndụ kamakwa ị na-emega ahụ ụbụrụ gị n'otu oge.
Ebumnobi ndị a nwere ike ịdị mfe dị ka ịnweta isi ihe ole na ole iji mee ngwakọta nke candies pụrụ iche. O doro anya na ha dabere na ihe omume na ọkwa ị nọ. Otú ọ dị, mmachi na-adịgasị iche site na ọnụọgụ mmegharị nke enyere na ịpị elekere ya mere mmegharị atụmatụ a ga-enwerịrịrịrị.